सरकारलाई कर्मचारीभन्दा गाडी पाल्न महंगो ! [लोकान्तर खोज]
काठमाडौं –सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै कर्मचारीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सवारीसाधनका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरेको पाइएको छ ।
सूचनाको हक प्रयोग गरी विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट लोकान्तरले मागेको सूचना र महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा सरकारलाई कर्मचारी पाल्नभन्दा उनीहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन पाल्न ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य फेला परेको हो ।
यसबारे प्रस्ट हुन केही उदाहरण हेरौं –
उदाहरण नम्बर १ :
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक सहसचिवले चढ्ने बा१झ ९९९३ नम्बरको ह्युण्डाइ टक्सन जिप २०७५ साउनदेखि २०७६ वैशाख मसान्तसम्म १० महिनाको अवधिमा ५ पटक मर्मत गरियो ।
प्लाई ह्वील एसी, ब्याट्री, टूल बक्स, सिङ्क रड, डी बुस, गलैचा, रिजिल बेरिङ लगायतका पार्टस् परिवर्तन र सर्भिसिङ चार्ज समेत जोड्दा गत आव २०७५/७६ को १० महिनाको अवधिमा ५ लाख १५ हजार ४ सय ४९ रूपैयाँ १५ पैसा खर्च भएको देखिन्छ ।
ती सहसचिवले १० महिनाको अवधिमा मासिक १ सय लिटरका दरले १ हजार लिटर इन्धन लिएका छन् । पछिल्लो एक वर्षयता इन्धनको मूल्यमा ठूलो घटबढ नभएकाले प्रतिलिटर सरदर १०० रूपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि कम्तिमा १ लाख रूपैयाँ इन्धनमा खर्च भएको छ ।
यस अवधिमा मन्त्रालयले मोबिल ३० लिटर उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा नाम चलेका कम्पनीका मोबिल खरिद गर्न न्यूनतम ७ सयदेखि अधिकतम १५ सय प्रतिलिटरसम्म मूल्य पर्ने देखिन्छ । कुन कम्पनीको मोबिल भने स्पष्ट नखुलाइएकाले सरदर एक हजार रूपैयाँका दरले हिसाब गर्दा ३० हजार रूपैयाँ मोबिलमा खर्च भएको छ ।
गाडीका लागि सरकारले चालक समेत उपलब्ध गराउने गरेको छ । हलुका सवारी चालकको गत आवको न्यूनतम पारिश्रमिक १८ हजार ५०० रूपैयाँ थियो । अहिले त्यसमा २० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत आवकै प्रसंग भएकाले चालकका लागि १० महिनाको अवधिमा १ लाख ८५ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिकबापत खर्च भएको छ ।
यस गाडीका लागि १० महिनाको बीचमा भएका देखिने किसिमका खर्चहरूको एकमुष्ट विवरण निकालौं–
चालकः करीब १,८५,०००/–
इन्धनः करीब १,००,०००/–
मोबिलः करीब ३०,०००/–
एक कर्मचारीलाई सवारीसाधन सुविधाका लागि १० महिनासम्म भएको कूल खर्च ८ लाख ३० हजारभन्दा बढी देखिएको छ । मासिक खर्च सरदर ८३ हजार रूपैयाँ पर्न जान्छ ।
तत्कालीन समयमा सहसचिवको ग्रेड र भत्ता बाहेकको बेसिक तलब मासिक ४० हजार १ सय ५० रूपैयाँ । १० महिनाको कुल पारिश्रमिक ४ लाख १ हजार ५ सय रूपैयाँ अर्थात् गाडीका लागि भएको खर्चको आधाभन्दा कम ।
ग्रेड र भत्ता सहितको तलब जोड्ने हो भने पनि गाडीका लागि भएको खर्च निकै बढी देखिन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा ३३ लाख ७२ हजार २७८ रुपैयाँ गाडी मर्मतमा खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये ३२ लाख २४ हजार १ सय ३ रुपैयाँ चार पांग्रे सवारी साधन मर्मतमा खर्च भएको देखिन्छ ।
उदाहरण नम्बर २ :
परराष्ट्र मन्त्रालयमा बा१झ ५४५४ नम्बरको निसान कार छ । मन्त्रालयका अनुसार पुलमा राखिएको गाडी उपसचिवहरूले चढ्छन् ।
गत आवको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा सो गाडी मर्मतमा १० लाख ४ हजार ५ सय ७३ रूपैयाँ खर्च भएको छ । मोबिल फिल्टर, एयर फिल्टर, क्लज प्लेट, इञ्जिन मेन्टिनेन्स लगायतमा उक्त खर्च भएको मन्त्रालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ ।
यसमा इन्धन, मोबिल, ड्राइभर सहितको खर्च जोड्दा झण्डै १४ लाखको हाराहारीमा पुग्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सवारीसाधन मर्मतमा मात्र १० महिनाको अवधिमा ५२ लाख ९२ हजार ४ सय ५३ रूपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।
उदाहरण नम्बर ३ :
उक्त गाडीका लागि पनि इन्धन, मोबिल, चालकसहित हिसाब गर्दा १० महिनाको अवधिमा कुल १० लाख रूपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।
यी त एक जनाले एउटा मात्र गाडी प्रयोग गर्ने सन्दर्भका उदाहरण मात्र हुन् । कतिपय सचिवले दुईवटा गाडी समेत चढिरहेका छन्, खर्च आफैं अनुमान लगाउनुस् ।
माथि उल्लेखित खर्चहरू गाडी सञ्चालनमा भएका हुन् । खरिदमा भएको खर्च हेर्ने हो भने झनै कहालीलाग्दो स्थिति छ ।
खरिदमा बर्सेनि अर्बौं खर्च !
महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजार बराबरका १ हजार २४ गाडी र ६ हजार ९ सय ९ मोटरसाइकल खरिद गरियो ।
पछिल्लो ३ वर्षमा १९ अर्ब बराबरका सरकारी सवारीसाधन खरिद गरिएका छन् ।
यसरी खरिद गरिएका सरकारी गाडीको एकीकृत अभिलेख समेत सरकारसँग छैन ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ –
‘नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनको अवस्था र मूल्य खुल्ने एकीकृत अभिलेख राखेको देखिँदैन । यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकबमोजिम सरकारी नम्बरमा २ पांग्रे सवारीसाधन ३५ हजार २८० र ४ पांग्रे सवारीसाधन २१ हजार ९५ वटा दर्ता भएको देखिएको छ । लेखापरीक्षणका लागि ६० निकायबाट विवरण माग गर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी २ निकायमा मात्र एकीकृत अभिलेख रहेको र अन्य निकायले आफ्नो कार्यालयको मात्र अभिलेख राखेको जवाफ दिएका छन् ।’
प्रतिवेदनले अर्को समस्या पनि औंल्याएको छ – कतिपय सवारीसाधनहरू मर्मत गर्न सकिने अवस्थामा पनि मर्मत गरिएको छैन भने लिलाम गर्नुपर्ने सवारीसाधनहरू समेत यत्तिकै थन्किएका छन् ।
सरकारी सवारीसाधन खरिद तथा मर्मतमा मिव्ययिता अपनाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । ‘मौजुदा सवारीसाधनहरू सदुपयोग नगरी बर्सेनि नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिले खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनेतर्फ प्रयास भएको देखिएन । सरकारी सवारीसाधन खरिद तथा व्यवस्थापनमा मितव्ययिता ल्याउन जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महालेखाले बर्सेनि यस किसिमका सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन ।
सरकारी सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मतमा हुने खर्चलाई न्यूनिकरण गर्न र आर्थिक रूपमा मितव्ययी बनाउन भनेर २०७२ सालमा सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत)सम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको थियो ।
उक्त निर्देशिका अनुसार सवारी सुविधा पाउने कर्मचारी (सचिव र सह–सचिव)ले मर्मतका लागि खरिदको ३ वर्ष नपुगेको नयाँ गाडीको हकमा मासिक ५ हजार र त्यसभन्दा पुराना गाडीको हकमा सचिवलाई मासिक १० हजार र सह–सचिवलाई ७ हजार रूपैयाँ उपलब्ध हुन्छ ।
सवारी चालकका लागि तृतीय तहका हलुका सवारी चालकले पाउने पारिश्रमिक बराबरको रकम र सचिवलाई १२५ तथा सहसचिवलाई १०० लिटर इन्धन मासिक उपलब्ध हुन्छ ।
यो निर्देशिका अनुसार सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीले सरुवा भएर जाँदा पनि सोही गाडी प्रयोग गर्ने र त्यसै अनुसार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यसो गर्दा खर्चमा कमी आउने र प्रयोगकर्ताले पनि मर्मतमा निश्चित रकम प्राप्त हुने भएकाले जतन गर्ने विश्वासका साथ निर्देशिका ल्याइएको थियो ।
उक्त निर्देशिका समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ–
‘नेपाल सरकारले आफैं सवारीसाधन चलाउन चाहने राजपत्राङ्कित विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई सवारीसाधनसहित इन्धन, मर्मत र सवारीचालक खर्च एकमुष्ट उपलब्ध गराई सरकारी सवारीसाधन सञ्चालनमा मितव्ययिता ल्याउने उद्देश्यले सवारीसाधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार तीन निकायका राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका १० कर्मचारीले मात्र निर्देशिकाबमोजिम सवारीसाधन चलाएको पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइएन ।’
(गाडी मर्मतमा हुने चलखेलसम्बन्धी विवरण आगामी अंकमा प्रस्तुत गर्नेछौं ।)
खुला सीमाले नेपाली कापी उद्योग सङ्कटमा बाँके– बाँकेको नेपालगञ्जका बिक्रेता तथा उपभोक्ताले बिना भन्सार भारतका विभिन्न ठाउँबाट कापी ल्याउने गरेका छन् । यसले गर्दा यहाँका कापी उद्योग समस्यामा परेका छन् । स्थानीय उत्पा...
५ सीडीओको सरुवा, को कहाँ ?
यी हुन् 'भीआईपी' का चर्चित काण्डहरू (सूचीसहित)